Maxay Ciidammada Mareykanka Sameyn Doonaan Haddii Ay TPLF Addis Ababa Weerarto? - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Maxay ciidammada Mareykanka sameyn doonaan haddii ay TPLF Addis Ababa weerarto?
Maxay ciidammada Mareykanka sameyn doonaan haddii ay TPLF Addis Ababa weerarto?
Janaraal William Zana
Ciidammada militariga ee ku sugan saldhiga Mareykanku ku leeyahay dalka Jabuuti ayaa si wayn isha ugu haya qulqulutooyiinka ka jira dalka Itoobiya
Abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee saldhiga dalka Jabuuti Janaraal William Zana ayaa sheegay in “halkan ay u joogaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka gobolka”.
Mr Zana ayaa sheegay in dibaato kasta oo ka dhacda dalka Itoobiya ay saameyn ku yeelanyso ammaanka iyo xasilloonida guud ahaan gobolka.
“Marka itoobiya uu ka dhaco dagaal gudaha ah taasi waxay sababi kartaa in ay go’aansadaan in ay ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay kala soo baxaan, waxaa halkaasi ku sugan 5 dal oo ka tirsan midowga Afrika oo ay arrintan saameynayso waxa jirta suurtagalnimo ah in kooxaha xagjirka argagixisada ay halkaasi dhaqdhaqaaq ka sameeyaan,” ayuu yiri Mr Zana.
Mar wax laga waydiiyay tallaabada ay militariga Mareykanka qaadayaan haddii ay TPLF soo galaan Addis ababa ayaa waxaa uu sheegay in doorka ay u joogaan gobolka uu yahay in ay ka jawaabaan xasaradaha iyo dhibaatooyiinka.
“Doorkeena asaasiga ah ee halkan aan u joogno waa in aan awood u yeelano inaan ka jawaabno dhibaatooyiinka, gaar ahaan inaan ka jawaabno dhibaatada la so gudboonaata diblomaasiyiinta Mareykanka guud ahaan Afrika gaar ahaan kuwa bariga Afrika,” ayuu intaa ku daray.
Jeneraalka hogaamiye ciidamada Mareykanka ee geeska Afrika Janaraal William Zana ayaa xusay in ay u diyaar garoobeen ka jawaabida haddii Addis ababo uu dagaal ka dhaco oo ay xaaladda sii xumaato.
“Waxaan sameynay diyaar garow wanaagsan iyo qorshe si ay noogu suuragsho in aan ka jawaabno oo aa gacan ka geysano daad-gureynta shaqaalaha iyo inaan sameyno howlgal daad-gureyn ah oo ballaaran oo laga soo qaadayo shaqaalaha Mareykanka , muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa dalalka kale, ayuu yiri Janaraal Zana.
Dhanka kale Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo todobaadka soo socda ku soo wajahan bariga Afrika ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in Itoobiya ay ka sii darto haddii uu sii socdo dagaalka sokeeye.
Waxaa uu ka digay in dagaalka Itoobiya uu ku sii fidi karo dalalka kale ee gobolka.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa farta ku fiiqay in wadada kale ee furan ay tahay midda wadaxaajoodka iyo xabad joojinta.
Mr Blinken ayaa la filayaa inuu Isniinta u ambabaxo dalka Kenya, halkaasi oo uu kala hadli doono xaalada dalka Itoobiya.
Ciidamada Maraykanka iyo xulafadooda ayaa saldhig weyn oo lagu magacaabo Camp Lemonnier ku leh dalka Jabuuti.
Previous articleAbaal Marinta Tartanka Badbaadinta Akhriska!
Next articleMuhiimadda Cabbista Sharaabka Liin Macaanta